Proximity Kushambadzira: Chii icho? Mhando dzipi?
Pandinongopinda muketani yangu yeKroger (supamaketi), ndinotarisa pasi pafoni yangu uye iyo app inondizivisa kwandinogona kuburitsa yangu Kroger Savings barcode yekutarisa kana ini ndinogona kuvhura iyo app kuti nditsvage nditsvage zvinhu mukati nzira. Pandinoshanyira chitoro cheVerizon, yangu app inondinyevera ine chinongedzo kutarisa-ndisati ndatombobuda mumotokari.
Iyi mienzaniso miiri mikuru yekusimudzira ruzivo rwevashandisi kubva pa hyperlocal zvinokonzera. Iyo indasitiri inozivikanwa se Proximity Kushambadzira.
Haisi indasitiri diki, inotarisirwa kukura kusvika $ 52.46 bhiriyoni USD na2022 maererano MarketsandMarkets.
Chii chinonzi Proximity Marketing?
Pedyo kushambadzira chero sisitimu inoshandisa matekinoroji enzvimbo kutaurirana zvakananga nevatengi kuburikidza nemidziyo yavo inotakurika. Pedyo kushambadzira kunogona kusanganisira kushambadzira zvinopihwa, mameseji ekushambadzira, rutsigiro rwevatengi, uye kuronga, kana imwe nzira zhinji dzekubatana pakati pemushandisi wenharembozha nenzvimbo yavari padyo nepadyo.
Zvishandiso zvekushambadzira kwepedyo zvinosanganisira kugoverwa kwenhepfenyuro kumakonzati, ruzivo, mitambo, uye magariro mashandisiro, zvitoro zvekupinda, nzira dzekubhadhara, uye kushambadzira kwemuno
Proximity kushambadzira haisi imwechete tekinoroji, inogona kuitiswa uchishandisa nzira dzinoverengeka dzakasiyana. Uye haina kuganhurirwa kune smartphone kushandiswa. Malaptop emazuva ano ayo akagoneswa GPS anokwanisa zvakare kutariswa kuburikidza nehumwe hunyanzvi hwehunyanzvi.
NFC - Iyo nzvimbo yefoni inogona kutariswa na padyo-munda kutaurirana (NFC) inogoneswa parunhare rwunobatanidza neRFID chip pane chigadzirwa kana midhiya. NFC ndiyo tekinoroji yakatumirwa kuApple Pay uye mamwe matekinoroji ekubhadhara asi haifanirwe kuganhurirwa pakubhadhara. Mamiziyamu nezvivakwa, semuenzaniso, zvinogona kuisa zvishandiso zveNFC kupa ruzivo rwekushanya. Zvitoro zvinotengesa zvinogona kuendesa NFC pamashefu yeruzivo rwechigadzirwa. Iko kune tani yekushambadzira mukana neNFC tekinoroji.
Geofencing - Paunenge uchifamba nefoni yako, yako nhare yekubatanidza inotarisirwa pakati peshongwe. Meseji mameseji kushambadzira masisitimu anogona kushandisa yako nzvimbo kusundira mameseji kune izvo chete izvo zvishandiso zviri mukati medzimwe nharaunda. Izvi zvinozivikanwa se SMS Geofencing. Haisi tekinoroji chaiyo, asi inogona kubatsira kuve nechokwadi chekuti meseji yako inongotumirwa kune vateereri vaunoda panguva yaunoda.
MAKARALI USB - Nzvimbo dzekutengesa dzinogona kushandisa beacon iyo inogona kushamwaridzana ne smartphone yako. Kazhinji pane chishandiso chemafoni chinogonesa tekinoroji uye mvumo inokumbirwa. Unogona kusundira zvirimo kuburikidza neBluetooth, shandira mawebhusaiti emuno kubva kuWiFi, shandisa bhakoni senzvimbo yeInternet yekuwana nzvimbo, kuita seNzvimbo yekutapa, kupa masevhisi ekudyidzana, uye kushanda pasina Internet yekubatanidza.
RFID - Kune matekinoroji akasiyana anoshandisa masaisai enhepfenyuro kuona zvinhu kana vanhu. RFID inoshanda nekuchengetera serial nhamba mumudziyo inoratidza chinhu kana munhu. Ruzivo urwu rwakamisikidzwa pane microchip inosungirirwa kune kanyanga. Iyi inonzi tag yeRFID. Iyo chip inopfuudza iyo ID ruzivo kune muverengi.
Proximity ID - Aya makadhi epedyo kana makadhi eID asingabatanidzwe. Aya makadhi anoshandisa yakanamatira kanyanga kutaurirana neyekure inogamuchira mukati memasendimita mashoma. Proximity makadhi anoverengwa-chete zvishandiso uye anonyanya kushandiswa semachengetedzo makadhi ekuwana musuo. Aya makadhi anogona kubata mashoma ruzivo.
Makambani anoshuvira kugadzira aya mapuratifomu anoshandisa nharembozha dzakasungirirwa, nemvumo, kunzvimbo inowanikwa nharembozha. Kana iyo nharembozha ikapinda mukati meimwe nzvimbo, ipapo tekinoroji yeBluetooth kana NFC inogona kunongedzera kwavanogona kupihwa mameseji.
Proximity Kushambadzira Hakugare Inoda Inodhura Mapurogiramu uye Geocentric Technology
Kana iwe uchida kutora mukana wepedyo kushambadzira pasina ese tekinoroji… iwe unogona!
QR Makodhi - Unogona kuratidza masaini pane imwe nzvimbo ine kodhi yeQR pairi. Kana mushanyi akashandisa foni yavo kuongorora iyo QR kodhi, iwe unonyatsoziva kwavanowanikwa, vanogona kuendesa inoenderana yekutengesa meseji, uye nekucherechedza maitiro avo.
Wi-Fi Hotspot - Unogona kupa yemahara wifi hotspot. Kana iwe wakambopinda mune yekubatana nendege kana kunyangwe Starbucks, iwe waona zvine simba kushambadzira zvemukati izvo zvinosundirwa zvakananga kumushandisi kuburikidza newebhu browser.
Mobile Browser Detection - Batanidza geolocation mune yako webhusaiti webhusaiti kuti uone vanhu vachishandisa Mobile Bhurawuza kunzvimbo yako. Unogona kukonzera popup kana kushandisa zvine simba zvemukati kunongedza iye munhu - angave kana asiri paWifi yako. Iyo chete yekudzikira kune izvi ndeyekuti mushandisi anozobvunzwa mvumo kutanga.
Zvikwereti Zvokusarudza yakagadzira iyi infographic seinotarisa yeProximity Kushambadzira kwemabhizinesi madiki uye epakati-epakati (maSME):
Tags: chiitikoMAKARALI USBbluetooth kushambadzirasarudzo sarudzogeofencingHoperlocalizationhotspot kushambadzirahyper-localizationhyperlocalhyperlocal kushambadzaibeaconbhizimusi repakati nepakatimobile kubhurawuzapadyo nemunda kutaurirananfcproximity kushambadziraproximity yekushambadzira manhambaQR Makodhimadiki uye epakati-saizi mabhizinesiBhizinesi dukusmechii chinonzi proximity marketingWiFi hotspot
Nzvimbo-Yakavakirwa Kushambadzira: Geo-Fencing uye maBeacons
Proximity yakavakirwa kushambadzira mhinduro, inogona kupa vatengi vako iyo yakasarudzika, yakasarudzika yekutenga ruzivo
Kukadzi 19, 2016 na5:40 PM
Nice Blog ndatenda nekunyora kunze dzakasiyana sarudzo. Ndainetseka kuti mumwe nemumwe wavo aitamba sei munzvimbo iyi. Iwe unoitika here kuziva kwandinogona kuwana runyorwa rwepamusoro Proximity Marketing tekinoroji manfucaturers? Ndiri kunyatso kutsvaga tekinoroji yeBluetooth.